Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiilada, waxay kulan laba casho socday la qaateen Madax sare oo ka socotay World Banka oo Hogaaminayey Frederick Yankey iyo xubno kale. |
Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiilada, waxay kulan laba casho socday la qaateen Madax sare oo ka socotay World Banka oo Hogaaminayey Frederick Yankey iyo xubno kale.
Hargeisa(GNN):-Kulankan waxa qayb ka ahaa Xafiiska Hanti Dhawrka Guud ee Qaranka iyo Madaxa Wasaarada Maaliyada u qaabilsan dib u habeynta Maamulka Maaliyada (PFM).
World baanka oo ka taageera qaybahaas kala duwan dhanka Tababarada, la-taliyayaasha Xisaabaadka iyo Maaliyadda, qalabaynta xafiisyada, Tababarka iyo tayeynta Shaqaalaha ka shaqeeya Hay’adahaas kala duwan.
kulankan oo ka dhacay Xafiiska Guddida ee Xarunta Golaha Wakiilada Somaliland. Ayay dhammaan dhinacyadu si buuxda isula qaateen in la wadda shaqeeyo, iyadda oo Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qaranku Golaha Wakiilada u qaabilsan tahay Korjoogtaynta, qiimaynta iyo ka warbixinta, Xisaabaadka dawlada iyo dib u eegista Xisaab-xidhada qaranka ee hantidhawrku soo sameeyo iyo sidoo kale Xisaabxidhka Xafiiska Hanti dhawrka Guud ee Qaranka. Iyadoo sidoo kalena ay dib u eegis ku samaynayaan Baadhitaanada xisaabeed ee ay hay’addaha dawladeed ku sameeyaan Hantidhawrku
Iyaddoo ugu dambeyntii World Bank iyo Guddidu si buuxda isula qaatay sii xoojinta Xidhiidha Guddida iyo World Bank, Maadaama oo World Bank Somaliland kala shaqaynayey muddooyinkii u dambeeyey dib-u-habeynta Maamulka Maaliyadda, iyadda oo ay qayb ka tahay Maamul wanaaga, daah-furnaanta iyo isla xisaabtanka Ha’addaha Dawlada.
Bahda warbaahinta ee Golaha